mardi, 20 septembre 2016 11:31
Tsikaritra fa mbola betsaka ireo mamadika razana eto amintsika. Misy ihany anefa ireo efa miala amin’izany, izay efa mihamaro an'isa, noho ny fandaniam-bola na koa ny resaka finoana fotsiny ihany. Efa mamaramparana ny fotoam-pamadihana amin’izao fotoana ireo olona.
mardi, 20 septembre 2016 10:04
Hetsika OurOcean 2016 : Malagasy iray hotolorana loka anio
Homarihina anio talata 20 septambra tolakandro ao amin’ny auditorium American Center, Tanjombato-Antananarivo ny hetsika manodidina ny fiahaonambe momba ny ranomasina natao tany Washington ny 15-16 septambra 2016. Mandritra izany no hanolorana ny loka ho an’ilay Malagasy nahazo tamin’ny fifaninanana sary nokarakarain’ny Departemantam-panjakana Amerikana ho an’ny firenena aty Atsinanan’i Afrika manodidina ny hetsika OurOcean 2016. Hojerena mandritra ny lanonana ihany koa ny horonan-tsary « The Last Ocean ». Ny Masoivoho Amerikana sy ny USAID ary ny American Center no tompomarika amin’ny hetsika.
Tahiritsary Sobika Toliara
Oniversite Maninday Toliara : Misy mandrahona ho faty ny mpampianatra
Niato nanomboka omaly ny fampianarana eny amin’ny oniversite Maninday-Toliara. Mitaraina ireo mpampianatra fa manjaka loatra ny tsy fandriampahalemana ateraky ny fisian’ny olon-tsotra mibodo ny tanin’ny oniversite. Misy mpampianatra lahy iray iharan’ny fandrahonana ho faty, ka nandray fanapahan-kevitra ny tsy hampianatra mihitsy aloha mandrapaha ireo mpampianatra.
lundi, 19 septembre 2016 22:08
Sary Sobika Farafangana
Farafangana : Tapaka 13 ora ny jiro androany
Tapaka nanomboka tamin’ny 4 maraina ny jiro teto Farafangana androany, ary tsy niverina nirehitra izany raha tsy tamin’ny 7 ora hariva. Tsy fisiana solika no voalaza fa antony, miampy ny delestazy teknika.
lundi, 19 septembre 2016 15:42
Sary Sobika Mahajanga
Oniversite Mahajanga : Mitaky vatsim-pianarana ny mpianatra
Nametrahan’ny mpianatra sakana ny vavahady miditra ny campus Ambondrona androany, tsy tafiditra ireo mpiasa sy mpampianatra ary ny filohan’ny oniversite Mahajanga, profesora Rakotoarivony Emmanuel, hamonjy fananganan-tsaina maraina. Mitaky ny vatsim-pianarana efa-bolana sy ny “indemnité de stage” no antony. Nanazava ny filohan’ny oniversite fa tsy miankina amin’izy ireo ny famoahana io vatsim-pianarana io fa amin’ny ministeran’ny fampianarana ambony.
dimanche, 18 septembre 2016 13:40
Sambava : Very ny lakolosin’ny Fjkm ao Andratamarina
Androany maraina teo, raha handeha hampaneno lakolosy ny tompon’andraikitra vao taitra fa ny fitoerana nipetrahany sy ny tadin-dakolosy sisa tavela teo fa ny lakolosy nanjavona.
vendredi, 16 septembre 2016 22:56
Eclipse: adinony ny nandalo teto Madagasikara
Efa tsy nahay nikajy intsony koa ve ireo manam-pahaizantsika? Raha misy ny zavatra tsy miovaova dia io fiodonan'ny tany sy ny volana ary ny masoandro io. Raha nolazaina fa amin'ny 8 ora alina no hifanakona ny tany sy ny volana mihoatra amin'ny masoandro, dia nihemotra amin'ny 10 ora alina. Tapitra ihany ny alina fa mibalika aloha hatreto i kala volana izao amin'ny 11 ora alina izao.
vendredi, 16 septembre 2016 21:20
Sary Sobika Fianarantsoa
Isantaona Soatanana : Tonga iray andro mialoha ny Filoha
Tonga eto Fianarantsoa ny filoham-pirenena rehefa avy nanao fitsidihana tany Mahajanga. Anton-diany ny famonjena ny hetsika ara-pinoana any Soatanana ny andron'ny sabotsy 17 Septambra. Nandritra ny resadresaka nifanaovany tamin'ny mpampiantrano teny amin'ny seranam-piaramanidina Beravina no nilazany fa napetraka ho filamatra eo amin'ny asa fampandrosoana ny renivohi-paritany enina, ka isan'izany i Fianarantsoa. Fitsenana ihany no natao ity tolakandro ity. Ny marain'ny sabotsy izy no hanainga mianandrefana hamonjy ny Isantaona any Soatanana. Nomarihiny tamin'izany ny faniriany manokana hanatrika izany raha toa ka ny zaika ara-pivavahana any Ankaramalaza no mahazatra azy hatramin'izay.
vendredi, 16 septembre 2016 20:46
Sary Sobika 20h
Eclipse lunaire: Mihemotra amin'ny 22h
20h: Niasa mafy ny Jirama ka tsy nisy delestazy eny amin'ny volana. Raha ny re dia hiemotra amin'ny 22h indray ilay eclipse lunaire.Diso kajy ve ny manam-pahaizana momba izany?
vendredi, 16 septembre 2016 13:00
Tahiritsary Sobika Ambatondrazaka
Ambatondrazaka : Lany ny solika, tapaka ny jiro
Tapaka nanomboka tamin’ny 7ora maraina ny jiro teto Ambatondrazaka. Lany solika ny Jirama. Miandry toromarika avy amin’ny Fanjakana ny orinasa Jovenna, mpamatsy solika ny Jirama eto Ambatondrazaka vao manohy ny famatsiana indray.
Page 324 sur 407